Emcimbini osihloko sithi: Taking African medicine to greater heights, bekunandisa iqembu Ikusasa Lethu, elihlanganisa abafundi base-UKZN elicule umculo wesiNtu futhi basina.
IPhini LeSekelashansela EliyiNhloko eKolishi Lezifundo Zezempilo e-UKZN, uSolwazi Busisiwe Ncama, uthe uyaziqhenya ngokuthi isikhungo sibe nomcimbi onjengalo ohlonipha imithi yesiNtu. Ubalule Ezezifundo ZokuXilonga Imithi yesiNtu, ekhempasini i-Howard College, njengesikhungo esasungulelwa ukuhlanganisa abelaphi bendabuko nabafundi kanye nokubuyisa isithunzi samakhambi esiNtu ngocwaningo olusezingeni eliphezulu. ‘Ngifisa ukubonga i-HWSETA ngemifundaze kwezokwelapha ngamakhambi esiNtu, okuqede umqondo wokuthi le ndima iyeke ukuthathwa njenge“nsumansumane” kepha ibe seqhulwini locwaningo,’ kusho uNcama.
USolwazi Nceba Gqaleni, uSolwazi wase-UKZN noyilungu le-Interim Traditional Health Practitioners Council of South Africa, ubalule ukuthi iNyuvesi yabafaka kanjani abelaphi bendabuko namakhambi esiNtu ohlelweni lokufunda ukufundisa ongoti bezokwelapha nabafundi ukuthi akusibo bodwa ongoti emkhakheni wezempilo.
Uyishayele ihlombe i-UKZN ngokuba yisikhungo semfundo ephakeme sokuqala ukusayina isivumelwano salolu hlobo sokusebenzisana nabelaphi bendabuko kwezempilo. ‘Kuwumsebenzi wethu ukubuyisa isithunzi sobuntu bethu, okuyindima yokwelapha yesiNtu, kanti wumsebenzi omkhulu lona,’ kusho yena.
Kwethulwe uxhaxha lwezinhlelo zokwelapha ngokwesiNtu okubalwa kuzo lokhu okungezansi:
• I-Traditional Medicine Laboratory yase-UKZN isetshenziselwe ucwaningo olumqoka lwezifo ezingathathelani, ukuvuselelwa kwezicubu, nezifo ezithathelanayo;
• Kwethulwe incwadi ngoNcwaba wangowezi-2018 ebizwa ngokuthi: Foundations of African Traditional Medicine, A Nguni Perspective;
• Ukusungulwa kwendawo yamakhambi ebe nocwaningo lwayo lokuqala esiBhedlela iYideni (eMgungundlovu);
• Ukuqalwa kwezinhlelo ezisebenzayo zokuqeqesha abelaphi bendabuko ngesandulelangculazi;
• Ukusebenza kwezincwadi zikadokotela ezigunyazwe wumNyango wezeMpilo abelaphi bezendabuko abangazinika iziguli zabo.
UNkk Elaine Brass, isikhulu esiphezulu se-HWSETA, uthe ujabulile ngokuba yingxenye yalo mcimbi. Ukuthakasele ukusayinwa kwesivumelwano nokuqiniswa kobudlelwano bokusebenzisana phakathi kwe-HWSETA ne-UKZN.
Ubongele izitshudeni ezinemifundaze yezifundo zokwelapha ngamakhambi esiNtu, wazifisela impumelelo ezifundweni zazo. ‘Yazini ukuthi nineqhaza elimqoka ekuthuthukiseni lo mkhakha. Sikubheke ngamehlo abomvu ukuthola ikhambi, hhayi lengculazi kuphela kepha futhi nelomdlavuza,’ kusho yena.
IPhini leSekelashansela kwezoCwaningo, uSolwazi Deresh Ramjugernath, uncome igalelo lamakhambi esiNtu enqubweni yohulumeni emhlabeni.
Ubonge umNyango wezeMpilo ngokuqinisa ubudlelwano bawo neNyuvesi. ‘Ngithakasile ngokusebenzisana kwe-HWSETA neNyuvesi ukwenza ukuthi ukwelapha ngamakhambi esiNtu kuhlonipheke, kube sezingeni elifana nelokwelapha ngamakhambi esilungu,’ kusho yena.
UMnu Vukani Khoza, umQondisi wezamaKhambi esiNtu emNyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natali, unxuse i-UKZN ukuthi ibeke eqhulwini izinto ezidinga ukucwaningwa, wabonga Ikusasa Lethu ngokuqhakambisa isiko nomculo kwesiNtu. ‘Ngiyabonga ngaleli thuba kanti ngibubheke ngamehlo abomvu ukusebenzisana neNyuvesi okuzohlomulisa abelaphi bendabuko,’ kusho uKhoza.
Amagama: nguHlengiwe Precious Khwela
Isithombe: wu-Albert Hirasen